Articles tagged 'eric chipeta'
Chipeta eyes the next step 24 November 2018 HARARE - After serving the game in the Central Region for more than two decades, Eric Chipeta now wants to make the step up the ladder and sit on the Zimbabwe Football Association (Zifa) board. Chipeta will go up against five other candidates — Philemon Machana, Chamu Chiwanza, Barry Manandi, ...
Chipeta bids farewell in style 18 June 2014 HWANGE - Dynamos' defeat at the hands of Hwange at the weekend was purely down to the collective teamwork by the coalminers and the industry of Zimbabwe international defender Eric Chipeta. The tall defender, who was making his last appearance for the Hwange before moving to South Africa with ...
Hwange back on top 2 May 2014 HARARE - Eric Chipeta’s penalty helped Hwange see off ten-man Black Rhinos and reclaim Castle Lager Premier Soccer top spot at the Colliery yesterday with a 1-0 win. Chipeta scored from the penalty spot in the 40th minute to extent his team’s unbeaten run to five games. Dynamos surrendered ...
Hwange edge Chicken Inn 20 October 2013 BULAWAYO - Warriors defender Eric Chipeta was a villain turned hero for visiting Hwange after recovering from a first half penalty miss to lead the coal miners to a much needed 2-1 victory over hosts Chicken Inn in a Castle Premiership encounter at Barbourfields Stadium on Saturday. The ver...
Tripple B, Hwange share spoils 15 September 2013 BEITBRIDGE – Tripple B and Hwange settled for a 1-1 draw in a bottom of the table Castle Premiership match at Dulibadzimu Stadium on Saturday. Tripple B surged ahead in the 16th minute through aa spot kick converted by Aleck Marime before Zimbabwe national football team centre back Eric Chipet...